Yakha Izikweletu Zakho Zobumbano - Ibhizinisi Ehlukile kuPeraonal
Ukwakha isikweletu senkampani isenzo sokusungula isikweletu sebhizinisi seqiniso futhi esihlukile. Lokhu kusho ukuba nebhizinisi leqiniso futhi elihlukile. Ngokwakha inkampani noma i-LLC, ungakhishwa i-EIN (Inombolo Kamazisi Yomqashi) noma i-ID Yentela evela ku-IRS. Lokhu empeleni, inombolo yokuphepha kwezenhlalo yebhizinisi lakho. Ukuvumela ukuthi uvule i-akhawunti yasebhange, yindlela i-IRS ezokhomba ngayo ibhizinisi lakho futhi ibe yisiqu sephrofayili yakho yesikweletu ehlukile.
Izinketho zakho zebhizinisi
Ibhizinisi Elisha - Ungaqala ukwakheka kwebhizinisi elisha ngenkathi wenza le nqubo. Inqobo nje uma usuqede izinyathelo ekhasini lokuqala Izikweletu Zokwakha Zokwakha - Igama Lebhizinisi futhi uyazi ukuthi igama lebhizinisi lakho lilungele ukwakha isikweletu ngalo. Inqubo yokufaka ithatha amasonto ambalwa (ngokuya ngesimo sakho kanye nezikhathi zokugcwaliswa kwawo) futhi izindleko ziqala ngo- $ 149.00 kuphela nezindleko zikahulumeni wakho.
Ibhizinisi Elikhona - Izinkampani Incorporate ine yokusungula ye Izinhlangano Ezigugile Nezinkampani ezitholakala ngokushesha. Lezi izinhlangano zebhizinisi esezakhiwe kakade, noma ezifakiwe. Lokhu kunikeza ukuqala kancane kwekhanda. Kukhona ababolekisi ngezindlela ezibandakanya ukuthi kufakwe isikhathi esingakanani ibhizinisi. Usebenzisa inkampani endala, uvula iminyango lapho ufaka isicelo sesikweletu. Izinqubo ezithandekayo zilingana nezinketho ezinhle namanani.
Noma iyiphi indlela, kufanele ube nesakhiwo sebhizinisi sangempela ukusungula isikweletu sebhizinisi. Abaxhasi be-Sole bangase baqhube ibhizinisi, noma kunjalo kodwa akuyona ibhizinisi elihlukile kumnikazi. Lokhu kusho ukuthi isikweletu esinikezwe i-Sole Proprietor sehlukile kunesikweletu somuntu siqu, kuzoba yiprofayili yomuntu siqu.
Indawo Yakho Yenhlangano Namakheli
Kufanele ube nekheli lebhizinisi elisemthethweni elingeyona ibhokisi leposi leposi, kufanele libe yindawo ebonakalayo. Ungasebenzisa ikheli lakho lasekhaya, noma kunjalo usengozini yokulahlekelwa yithuba lokuthola isikweletu kubabolekisi abangaxhasi amabhizinisi asekhaya. Ukusebenzisa indawo ethengiswa ngebhokisi leposi kuzokwanela, noma kunjalo lezo zinhlobo zamakheli zihlolisiswa ngababolekisi abadinga indawo yangempela yebhizinisi ukuthola imali efanelekile. Enye inketho ukujoyina uhlelo lwehhovisi noma ukuqasha isikhulu esiphezulu; lezi zinhlobo zezinhlelo zikunikeza inzuzo ephelele yehhovisi, inombolo yamahhala, ikheli lokuthumela, umamukeli, njll. - ukuthola ingxenye yezindleko.
Kufanele ube nekheli lakho lebhizinisi lenqubo. Izinkampani Ezihlanganisiwe zinikezela ngezinhlelo zamahhovisi ezifundweni eziningana ezihlinzeka ngayo yonke inzuzo yokuba nebhizinisi lakho ngendawo, ngengxenyana yezindleko.
Ingxenye yobunikazi bebhizinisi lakho ukuba nenombolo yocingo yebhizinisi elizinikezele. Yini evumelana nenombolo yocingo yebhizinisi? Eyenzelwe inkampani yakho, ebanjiwe ukuthi “Ngiyabonga ngokubiza [igama lenkampani]…” noma iphathwe ngobuchwepheshe. Imikhonzo yebhokisi lemilayezo yezwi kufanele ifake igama lenkampani noma igama lokuhweba kwebhizinisi ekurekhodeni. Ukuba ne-lineline yangempela yebhizinisi ngokusebenzisa umhlinzeki wendawo ikuvumela ukuthi ufakwe kusizo lwemibhalo lwendawo lwayo lwe-411. Ingxenye yenqubo yokuqinisekiswa kwesikweletu sebhizinisi, ababolekisi bazozama ukuthola ibhizinisi lakho ngomkhombandlela womphakathi, njengosizo lwe-411. Imigqa yefoni kanye ne-Intanethi (VOIP) ingasetshenziswa, noma kunjalo ubeka engcupheni yokungafakwa kosizo lomqondisi we-411 okungaholela ekutheni abanye abakweletwayo bahlolisise ibhizinisi lakho, futhi noma bangakufanelekeli ukuthola isikweletu. Izinombolo zocingo zamahhala zihamba phambili ngokukholeka futhi zibiza kakhulu. Ungakhetha ukusetha inombolo ye-800 yebhizinisi lakho futhi uyiqede ohlwini lwemibhalo losizo kanye nokudlulisela phambili izingcingo kwi-Intanethi noma ngebhizinisi leselula lebhizinisi lakho.
Kanye negama lesizinda senkampani yakho, kufanele kusetshenziswe ikheli le-imeyili yebhizinisi, kunokuba InkampaniName @ gmail, Ngokwesibonelo. I-imeyili esekwe kwisizinda senkampani inikezwa abahlinzeki besizinda mahhala, ngakho-ke lokhu akufanele kunganakwa.
Ubunikazi bebhizinisi Nebhizinisi Lesikweletu
Njengoba ubona kuzo zonke lezi zinyathelo, inhloso lapha ukudala ubunikazi bebhizinisi obuhlukile kuwe. Uma uqhuba ibhizinisi, futhi futhi selifakiwe, nokho unekheli elisekwe ekhaya, inombolo yocingo nekheli le-imeyili lomuntu siqu, awuhlukile ngokusesikweni. Ngakho-ke lezi zinyathelo zakha ubunikazi obuhlukile benkampani ngezinhloso zokwakha isikweletu senkampani ngokwakho. Lapho uhlukanisa ibhizinisi lakho kakhulu kuwe, inqubo yokuthenga ngesikweletu yebhizinisi yakho izoba lula futhi amathuba amaningi ozoba nawo kubabolekisi. Empeleni, lezi zinqubo zivula iminyango kwizikhungo eziboleka kakhulu nabahlinzeki bezikweletu.
>> Qhubekela kusinyathelo Esilandelayo ekwakheni Ikhredithi Yezikweletu - Ukuxoxa Nge-ID Yakho Yesikweletu Sebhizinisi >>